ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်ပိုင်ဆိုင်မှုများ - ATLAS Tenerife®အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန် Properties ကို
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက်ညှိနှိုင်းထားသောဂုဏ်သတ္တိများကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအိမ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲ။ သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတန်ဖိုးထားပါ
La Orotava ရှိပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံရန်အတွက် Big House + Patio!
ရောင်းရန်: Tenerife, La Orotava မြို့အနီးတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်နေရာကျယ် ကြမ်းပြင်နှစ်ခု၊ အတွင်းပိုင်းဟင်းလင်းပြင် + ကျယ်ဝန်းသည့်ခေါင်မိုးလှေကားထစ်။ တိတ်ဆိတ်သောလူနေအိမ်ရပ်ကွက် ...
အယ်လ် Tanque, အယ်လ် Tanque 38435 Tenerife
ရောင်းရန်: Tenerife, El Tanque တွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကိုလိုနီခေတ်ကြီးသောအိမ်ကြီး! အသစ်သောမြို့အနီးတိတ်ဆိတ်သောသမိုင်းဝင်နေရာတွင် ...
Los Llanos တွင်မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများပါသောအိမ် !!
ရောင်းရန်: Los Llanos, Tenerife ရှိမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများရှိသောကျယ်ဝန်းသောအိမ်။ သမုဒ္ဒရာနှင့် Teide တောင်တန်းအပေါ် ၃၆၀ ºမြင်ကွင်းရှိသောလှပသောအိမ်ခြံမြေ! ကြီးမားသည် ...